Hoggaanka Cusub ee Xisbiga Dhexe - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Foto: Scanpix/Sveriges Radio.
Hoggaanka Cusub ee Xisbiga Dhexe
Liiskayga Finns i Min lista
La daabacay måndag 26 september 2011 kl 14.44
Shalayto oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Åre shir-weynihii xisbiga Dhexe ayaa xaaladda looga wada xaajooday ku saabsanayd dhismaha cusub iyo siyaasadda xisbiga, iyadoona ay xisbiga ku soo wajahan tahay is-bedeello fara badan marka laga yimaado hoggaan cusub oo uu xisbigu yeeshay. Sidoo kale ayaa shir-weynahaa lagu go’aamiyay shan qodob oo ka mid ah tallaabooyin uu xisbigu muddo sannad ah ku howlanaa. Hogaamiyaha cusub ee xisbiga Dhexe Annie Lööf ayaa ballan qaaday in xisbieedu yeelan doono waji cusub ama uu la soo bixi doono dardar hor leh. Gacan-yaraha xisbga Michael Arthursson ayaa sidan uga jawaabay dhabbada middaa loo mari doono:
- Dhinac waxay ku saabsan tahay sida Annie Lööf ugu guuleeysato siday fikirka xisbiga u soo ban-dhigi lahayd. Dhanka kale waxaa shir-weynaha lagu gaaray go’aanno dhowr ee wax ku ool ah. Waana mid caddeeysay howlaha na hor-yaal.
Muddadii shir-weeynaha lagu jiray ayuu xisbigu gaaray go’aammo kala duwan. Kuwasina oo ey ka mid ahaayeen in xisbigu damacsan yahay in 50% ee adeegga bulshada ey gacan ku yeeshaan shirkadaha madaxa-bannaan iyo ururrada tabarucca ku adeega. Midda kale ee shir-weeynaha lagu go’aansadey ayaa ah in xisbigu ka soo hor-jeedo ololaha siyaasaddeed iyo in waalidka loo daayo masuuliyadda sidii ey u kala goosan lahaayeen xilliga dhallaanka guriga lagu hayo, waxa afkan iswiidhishka lagu yiraahdo ”Föräldrarledighet”.